संसारमा भाषा कहाँबाट आयो त्यो त कसैलाई पनि थाहा छैन तर आजकल मानिस संसार घुम्ने भएकाले सबै ठाउँमा मान्य हुने शब्दहरु प्रयोग गर्न थालेको छ।
त्यस्तै विश्वमा प्रयोग हुने शब्द हजारलाई k लेख्छौ किन थाहा छ? जस्तै १० हजार लेख्नुपर्यो भने हामी १०K लेख्छौँ? किन १०T लेख्दैनौँ ? यो शब्दको उत्पति यसरि भएको थियो विश्वभर अहिले कुनै पनि शब्द छोटकरीमा लेख्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ।
प्रायः मानिसले अहिले संख्यालाई छोटकरीमा लेख्न थालेका छन्। यदि कसैलाई १० हजार वा १० मिलियन लेख्नुपर्यो भने उनीहरु १०K र १०M लेख्न मन पराउँछन्। तर, प्रश्न यहाँ उठ्छ कि यदि मिलियनलाई M ले संकेत गर्ने हो भने हजारलाई T ले किन संकेत नगर्ने ? यो ‘K’ शब्द ग्रिकबाट आएको हो। यो ग्रिक शब्द ‘Chilioi’ बाट सुरु भएको हो।
यसको मतलब हजार हुन्छ। पहिला ग्रिकमा हजारका लागि यसको प्रयोग हुन्थ्यो। बाइबलमा पनि यसको बयान गरिएको छ। ग्रिकपछि फ्रेन्चमा यो शब्दको प्रयोग हुन थाल्यो। जुन पछि गएर किलो बनाइयो।
त्यसपछि किलोको प्रयोग हजारसँग जोडेर गर्न थालियो। त्यसैले कुनै पनि चिजलाई हजारले गुणा गर्नुपर्दा त्यहाँ किलोको प्रयोग गर्न थालियो। जस्तै– १ हजार ग्रामलाई १ किलो, १ हजार मिटरलाई १ किलोमिटर, १ हजार लिटरलाई १ किलोलिटर आदि। अर्थात १ हजारका लागि किलोको प्रयोग हुन थाल्यो। यही कारण किलो नै हजारको प्रतीक बन्यो अनि किलोलाई k लेख्न थालियो। यही कारण आज पनि हामी हजार छोटकरीमा लेख्दा K लेख्छौ।